नेपालमा २२ मध्ये १६ जनाको निधनपछि मात्रै कोरोना पुष्टि, २२ जना को हुन ? (विवरणसहित) | नेपाल घटना
नेपालमा २२ मध्ये १६ जनाको निधनपछि मात्रै कोरोना पुष्टि, २२ जना को हुन ? (विवरणसहित)
प्रकाशित : ५ असार २०७७, शुक्रबार १०:३६
नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट २२ जनाको मृत्यु भएको छ । मृतकमध्ये १७ पुरुष र ५ महिला छन् ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने २२ जनामध्ये १६ जनाको मृत्यु भइसकेपछि मात्र कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरिएको छ । उनीहरुको ६ जनाको मात्रै कोरोना संक्रमण भएको थाहा पाइसकेपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
अन्य मुलुककमा कोरोना संक्रमण पत्ता लागिसकेपछि उपचारका क्रममा मृत्यु हुनेको संख्या धेरै छ भने नेपालमा भने मृत्यु भइसकेपछि मात्रै कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुने संख्या अधिक देखिएको हो । नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेमध्ये ७२ प्रतिशतभन्दा धेरैले मृत्युपछि कोरोना पुष्टि गरिएको हो ।
कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको विवरण:
१. सिन्धुपाल्चोक राम्चेकी २९ वर्षीया महिला ।
उनी १० दिनको सुत्केरी थिइन् ।
२ जेठमा निधन भई ३ जेठमा कोभिड १९ को संक्रमण पत्ता लागेको।
२. बाँकेको नरैनापुरका २५ वर्षीय युवक ।
३० वैशाखमा भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टाइनमा राखिएका ।
४ जेठमा मृत्यु भएपछि परीक्षणबाट संक्रमण पत्ता लागेको ।
३. गुल्मीका ४१ वर्षीय शिक्षक ।
५ जेठमा रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित क्रिमसन अस्पतालमा भर्ना भएका ।
जन्डिस समेत भएका उनको ८ जेठको विहान निधन भएको ।
४. बाराका ७० वर्षीय वृद्ध ।
क्षयरोग र स्वास प्रश्वासको समस्याका कारण २ जेठमा अस्पताल भर्ना भई ४ जेठमा मृत्यु भई १२ जेठमा संक्रमण पुष्टि भएको ।
५. ललितपुर बुङमतीका ५६ वर्षीय पुरुष, १२ जेठमा किष्ट अस्पताल भर्ना भई १४ जेठमा मृत्यु भएको छ ।
१५ जेठमा संक्रमण पुष्टि
७. दैलेखको दुल्लु नगरपालिका खागितडाका ३५ वर्षीय पुरुष ।
पटांगिनी बजार दुल्लुको क्वारेन्टाइनमा ढलेर बेहास भई केही समयमा मृत्यु ।
स्वाब परीक्षणका क्रममा १७ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
८. बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका धुरालसैनकी २ वर्षीया बालिका ।
बाबुआमासँगै बाजुराको धुरालसैन माविको क्वारेन्टाइनमा रहेकोमा १८ जेठको विहान मृत्यु भएको ।
१० जेठमा भारतबाट सपरिवार आएकी ।
९. दोलखा घर भएका ७६ वर्षीय पुरुष, १३ जेठमा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र हेमोरेजिक स्ट्रोक भई शल्यक्रिया गरी १५ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको थियो ।
उपचारका क्रममा उनको २१ जेठमा टिचिङ अस्पतालमै मृत्यु भएको ।
१०. पाल्पा सिलुवाखोलाका ४५ वर्षीय पुरुष ।
स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखिएको र स्वास्थ्यमा गडबडीपछि १९ जेठमा मिसन अस्पताल पाल्पामा लगिएको थियो ।
उपचारका क्रममा उनको २० जेठमा मृत्यु भएको थियो । २२ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
११. सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका १ हाँसेका २० वर्षीय युवक ।
७ जेठमा भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बसेका ।
परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएपछि २२ जेठमा घर गएकामा त्यहीं मृत्यु भएको थियो ।
मृत्यु भएपछि नमुना परीक्षणका क्रममा २३ जेठमा कोभिड १९ पुष्टि भएको
१२. डोल्पाका ५८ वर्षीय पुरुष ।
जगदुल्ला गाउँपालिका ३ घर भएका उनको २० जेठमा मृत्यु भएको ।
नमुना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरी २२ जेठमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुर्याइएको
२४ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
१३. कैलालीकी ५५ वर्षीया महिला ।
धनगढी ४ की मृगौला रोगी उनको डायलसिस गर्ने क्रममा २३ जेठमा मृत्यु भएको थियो ।
सेती अस्पतालमा डायलसिसका लागि आउँदा त्यही बेलामा मृत्यु भएको ।
२४ जेठमा कोरोना संक्रमण पत्ता लागेको
१४. स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका घर भएका ५८ वर्षीय पुरुष ।
मृत्यु पछि २६ जेठमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लागेको
१५. चितवन भरतपुर ११ का पुरुषको २७ जेठमा निधन भएको ।
निमोनिया संक्रमित उनको २६ जेठमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको ।
१६. अर्घाखाँचीको मालारानीको क्वारेन्टाइनमा बसेका ५७ का पुरुष ।
१२ दिन अघि मुम्बईबाट आई क्वारेन्टाइनमा राखिएको ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार गराई फर्कंदा कोद्रेखोलामा २८ जेठमा मृत्यु भएकोमा २९ जेठमा पत्ता लागेको ।
३० जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको
१७. पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका घन्टाघरमा २५ वर्षीय युवकको २८ जेठमा बेवारिसी लास फेला परेकोमा पोष्टमार्टमका लागि लगिएको ।
स्वाब परीक्षणका क्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको छ ।
३० जेठमा संक्रमण पत्ता लागेको र ३१ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको
१८. बारा जिल्ला निजगढ नगरपालिका ६ योजनाटोल निवासी ५ वर्षीय बालकलाई ज्वरो आएपछि वीरगञ्ज अस्पताल लगिएकोमा आरडिटी गर्दा पोजेटिभ आएपछि आइशोलेशनमा राखी उपचार शुरु ।
स्वाब परीक्षण गर्दा ३० जेठमा कोरोना पोजेटिभ पुष्टि भएको ।
प्रयोगशालाको नतिजा नआउँदै ३० जेठमा मृत्यु भएको ।
१९. गुल्मीका ३६ वर्षीय पुरुष ।
रेसुङ्गामा आइशोलेशनमा रहेकोमा ३१ जेठमा मृत्यु भएको ।
भारतबाट फर्किएपछि आइशोलेशनमा रहेकोमा स्वास्थ्यमा समस्या आएको ।
क्यान्सर संक्रमित उनको मृत्युको जानकारी ३२ जेठमा पुष्टि गरिएको
२०. बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ६ की ४६ वर्षीइा महिला ।
फोक्सो, मृगौला र प्यारालाइसिलकी विरामी उनको १ असारमा आइसीयुमा मृत्यु भएको छ ।
३ असारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको
२१. कैलाली, गोदावरी नगरपालिकाका ४६ वर्षीय पुरुष ।
सेती अस्पतालमा उपचाररत हुँदा मृत्यु भएको ।
धनगढीको नवजीवन अस्पतालमा उपचार गर्दा जेठ ३१ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि सेती अस्पताल सारिएको थियो ।
उपचारका क्रममा ३ असारको बेलुकी ७ बजेर ५२ मिनेटमा मृत्यु ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ असारमा जानकारी दिएको
२२. कैलालीको लम्किचुआकी ४३ वर्षकी महिला ।
टाउकोमा चोट लागेपछि नेपालगञ्ज मेडिकल अस्पतालमा भर्ना गरेको ।
२ असारमा शल्यक्रिया गर्नुअघि नमुना संकलन गरेकोमा सोही दिन नै मृत्यु भएको ३ असारको साँझ पुष्टि भएको थियो ।
कोरोनाबाट कहिले-कति जनाको मृत्यु भयो ?
गत जेठ १ गते सिन्धुपाल्चोककी २९ वर्षीया सुत्केरी महिलाले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकी थिइन् । उनी नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने पहिला व्यक्ति थिइन् । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ती महिलाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको घोषणा जेठ ३ गते गरेको थियो ।
ती महिला काठमाडौंको टोखा ९ बाट वैशाख २३ मा महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डेलिभरी हुन भर्ना भएकी थिइन् । उनले वैशाख २४ गते शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । उनलाई वैशाख २५ गते अस्पतालले डिर्स्चार्ज गरेको थियो । तर डिस्चार्ज भएर घर गएपछि उनलाई ज्वरो आउने र स्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि स्थानिय अस्पतालमा गएकी थिइन् । तर त्यहाँ उनलाई कोरोना भाइरसको आशंकामा धुलिखेल अस्पताल पठाएको थियो । अस्पतालमा ल्याउँदै गर्दा जेठ १ गते मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो ।
बाँके नरैनापुर ५ का २५ वर्षका पुरुषको पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट गत जेठ ४ गते मृत्यु भएको थियो । उनलाई जेठ ३ गते रातिदेखि ज्वरो आउने र झाडापखालाको समस्या देखिएको थियो । ४ गते बिहान ६ बजेर ४० मा मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । वैशाख ३० गते ती पुरुष भारतबाट आएका थिए ।
उनी नरैनापुर गाउँपालिका ५ स्थित भोज भगवानपुरस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । तर ती पुरुषको स्वाब संकलन गरेर भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो । कोरोना परीक्षणको रिर्पोट आउनुभन्दा अघि नै ती पुरुषको ज्यान गएको थियो । तर जेठ ४ गतेकै दिन दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनको संक्रमणबाटै मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो ।
गुल्मी मदाने गाउँपालिका धुर्कोटका ४१ वर्षका पुरुषको जेठ ८ गते कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती व्यक्तिलाई ज्वरो र जन्डिसको समस्या देखिएपछि जेठ १ गते रुपन्देहीको मणीग्रामस्थित क्रिमसन अस्पतालको भेन्टीलेटरमा भर्ना भएका थिए ।
जेठ २ गते भैरहवा अस्पतालका प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब परीक्षणका अस्पताल पठाएको थियो । तर नमुना परीक्षणको रिर्पोट जेठ ५ गते कोरोना पोजेटिभ देखिएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । उनको जेठ ८ गते अस्पतालमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । ती पुरुष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने तेस्रो व्यक्ति थिए ।
जेष्ठ ४ गते बारा कलैया ७ का ७० वर्षका पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती पुरुषको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । जेठ ३ गते नारायणी अस्पतालको टोलीले स्वाब संकलन गरे नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको थियो । तर त्यहाँ कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि थप परीक्षण गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाएको थियो । तर जेष्ठ १२ गते राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । ती ७० वर्षका जेष्ठ नागरिक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने चौथो व्यक्ति हुन् ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगपालिका बुङ्‌मती – २२ का ५६ वर्षका पुरुष कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ति पुरुषको जेष्ठ १४ गते ग्वार्कोस्थित किष्ट अस्पतालमा उपचाररत पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो ।
उनी कलेजोसम्बन्धी समस्या देखिएर जेठ ११ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । जेठ १२ गते आइसीयूमा सारिएको थियो । सोही दिन नमुना संकलन परीक्षणका लागि पठाएको थियो । उनलाई कोरोना पोजेटिभको रिर्पोट जेठ १४ गते आएको थियो । तर मन्त्रालयले १५ गते ती पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको थियो । उनी कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने पाँचौं व्यक्ति हुन् ।
अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिकाका ३५ वर्षको पुरुषको जेष्ठ १० गते मृत्यु भएको थियो । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ती पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको जेठ १६ गते जानकारी दिएको थियो । भारतबाट आउने क्रममा उनको सीमामा मृत्यु भएको थियो । उनको स्वाब जेठ ११ गते संकलन गरेर रुपन्देहीको प्रयोगशालामा परिक्षण गरिएको थियो ।
उनको कोरोना परीक्षणको रिर्पोटमा पोजेटिभ देखिएको थियो । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने छैटौं व्यक्ति हुन् ।
यस्तै, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका ७ का ३५ वर्षका पुरुषको जेठ १७ गते ज्यान गयो । उनी भारतबाट आएर स्थानीय विधुत प्राधिकरणको क्वारेनटिनमा बसेका थिए । उनको क्वारेन्टिनमै मृत्यु भएको हो । ती पुरुषमा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेष्ठ १८ गते अथार्त मृत्यु भएको दोस्रो दिन मात्र जानकारी दिएको थियो । उनी कोरोनाबाट ज्यान सातौ व्यक्ति थिए ।
बाजुराकी दुई वर्षकी बालिकाले कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट ज्यान गुमाइन् । जेष्ठ १० गते भारतबाट बुबा आमासँग नेपाल आएकी थिइन् । उनी स्थानीय क्वारेनटिनमा बसेकी थिइन् । ति बालिकालाई क्वारेन्टिनमा रहँदा ज्वरो स्वासप्रश्वासमा समस्या र झाडापखाला देखिएको थियो ।
जेष्ठ १५ गते बाजुरा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । १६ गते स्वाब सेती प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो । जेष्ठ १८ गते बिहान ति बालिकाको उपचारको क्रममा गएको थियो । उनको कोरोना परीक्षणको रिर्पोट पनि पोजेटिभ आएको जेठ १८ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको थियो । ती बालिका कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने आठौं केस थिइन् ।
दोलखाका ७६ वर्षका पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । जेष्ठ १३ गते सिनांमगलस्थित काठमाडौ मेडिकल कलेजमा मतिष्कघात भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको स्वाब संकलन गरेर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । उनको मतिष्कघातको शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको १५ गते कोरोना परीक्षणको रिर्पोट पोजेटिभ आएको थियो । थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ्) मा रिफर गरिएको थियो । सोही अस्पतालको आइसियुमा उपचारकै क्रममा जेठ २१ गते ज्यान गएको थियो ।
जेठ २० गते पाल्पाका ४५ वर्षका पुरुषको मृत्यु भएको थियो । पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका मिसन अस्पतालमा उपचाररत उनी मृत्यु भएको थियो । भारतबाट गत जेठ १५ गते आएका थिए । उनी स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहेका थिए । क्वारेन्टिनमा रहँदा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या देखिएको थियो । उनी जेठ १८ गते पाल्पाको मिसन अस्पतालमा भर्ना भएका थिए ।
अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको ज्यान गएको हो । उनको मृत्यु कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नै भएको जेष्ठ २२ गते मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने १० औँ व्यक्ति थिए ।
सुर्खेतका पञ्‍चपुरीका १८ वर्षका पुरुषको जेठ २२ गते मृत्यु भएको थियो । जेठ ८ गते भारतबाट नेपाल आएका थिए । उनी १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । उनलाई क्वारेन्टिनमा बस्दा कुनै संक्रमणको लक्षण देखिएको थिएन । घर जानुभन्दा अघि उनको क्वारेन्टिनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुले आरडीटी परीक्षण गरेका थिए । तर त्यसमा नेगेटिभ देखिएको थियो ।
उनी घर गएका थिए । तर उनको सोही दिनै मृत्यु भएको थियो । तर मृत्युपश्चात आएको परीक्षणको रिर्पोटमा कोरोना पोजेटिभ पोजेटिभ देखिएको थियो ।उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने ११ औं व्यक्ति थिए |
त्यसैगरी, डोल्पाका ५८ वर्षका पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । जेठ २१ गते विहानको २ वजे क्वरोन्टिनमै मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ती पुरुष जेठ १६ गते सुर्खेतबाट डोल्पा गएका थिए । १८ गते क्वारेन्टिननमा रहेका थिए । उनी दम रोगका बिरामी थिए । उनको कोरोना परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
उनको कोरोनाबाट ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेष्ठ २४ गते मात्र जानकारी दिएको थियो । ती पुरुष कोरोनबाट ज्यान गुमाउने १२ औँ व्यक्ति थिए ।
त्यसैगरी, धनगढी ४ का ५५ वर्षकी महिलाको पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । जेठ २३ गते सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौलाको डाइलासिस गदैगर्दा ति महिलाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु पश्चात ती व्यक्तिको स्वाब झिकेर परीक्षण गरिएको थियो । जसमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । यो केस सँगै मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको थियो ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वर्ष ५८ का पुरुषको पनि कोरोना भाइरसकोस संक्रमणबाट मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जेठ ६ गते ती पुरुषमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको पुष्टि गरेका थिए । उनी कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने १४ औं व्यक्ति थिए ।
चितवन भरतपुर ११ का ६८ वर्षको पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती पुरुषमा जेठ २६ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनलाई मधुमेह र उच्च रक्तचापको समस्या देखिएपछि भरतपुर अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत थिए । उनको उपचारकै क्रममा जेठ २७ गते बिहान मृत्यु भएको थियो । ती पुरुष कोरोना भाइरसको संक्रमणबट ज्यान गुमाउने १५ औँ व्यक्ति थिए ।
अर्घाखाँचीका ५७ वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । उनी भारतको महाराष्ट्रबाट गत जेठ १८ गते नेपाल आएका थिए । उनी नेपाल आएर अर्घाखाँची मालारानी ४ का सार्वजनिक आधारभुत विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । उनलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचारका लगिएको थियो ।
उपचारपश्चात फर्किने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि स्वाब संकलन गरेर परीक्षणका लागि प्रयोगशालमा पठाइएको थियो भने जेठ २९ गते कोरोना परीक्षणको रिर्पोट पोजेटिभ आएको थियो । मन्त्रालयले ती पुरुषको कोरोना संक्रमण देखिएको जेष्ठ ३० गते पुष्टी गरेको थियो ।
उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउने १६औं व्यक्ति थिए ।
जेठ २८ गते वीगञ्जको घन्टाघरमा भेटिएको बेवारिसे शवमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो । करिब २५ वर्षका पुरुषको बेवारिसे शव पोष्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पतालमा ल्याइएको थियो भने स्वाब संकलन गरेर नारायणी कै प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । जेठ ३० गते आएको रिर्पोटमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेष्ठ ३१ गते कोरोना संक्रमण देखिएको पुष्टि गरेको थियो ।
त्यसैगरी, जेष्ठ ३० गते वीरगञ्‍ज हेल्थ केयर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका ५ वर्षका बालकमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । बाराको निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर ६ का ५ वर्षका बालकको पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको थियो । उनलाई ज्वरो र श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्पतालको आइसोलेनमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।
सुरुमा अस्पताले गरेको आरडीटी परीक्षणमा ती बालक पोजेटिभ देखिएको थियो पुन पिसिआर गर्न स्वाब लिएको थियो । तर ति बालकको जेष्ठ जेष्ठ ३० गते नै मृत्यु भएको थियो तर ती पुरुषको कोरोना परीक्षणको पीसीआर रिर्पोट मृत्युपछि मात्र आएको जेठ ३१ गतेको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिएका थिए । ती बालक कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने १८ औँ केस थिए ।
गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर ४ जैशीथोकका ३६ वर्षीय पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो । ती पुरुष भारतबाट आएका थिए । जेठ १२ गते ती पुरुषमा कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना पुष्टि भएपछि उनी रेसुंगा नगरपालिकाको आइसोलेनमा रहेका थिए । ती पुरुषको जेष्ठ ३१ गते आइसोलेनमै उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
ती पुरुष क्यान्सरका विरामी समेत रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताएका थिए । ति पुरुषको कोरोना भाइरसबाट ज्यान गएको जानकारी मन्त्रालयले जेठ ३२ गते जानकारी दिएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गमाउँने १९ औा व्यक्ति हुन् ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका ६ की ४६ वर्षीया महिलाको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ । ती महिला मिर्गौलाको समस्या आएपछि नेपालगन्ज शिक्षण अस्पतालमा जेठ ३० गते भर्ना भएकी थिइन् । उनको अस्पतालमा उपचारका क्रममा असार १ गते साँझ नै मृत्यु भएको थियो ।
सोही दिन उनको स्वाब संकलन गरी कोरोना परीक्षणका लागि भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा नमुना पठाइएको थियो तर उनको कोरोना परीक्षणको रिर्पोट असार २ गते मात्र आएको थियो जसमा कोरोना संक्रमण भएको पाइएको थियो । उनको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गएको मन्त्रालयले असार ३ गते मात्र जानकारी दिए । उनी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुने २० औँ व्यक्ति थिइन् ।
गोदावरी नगरपालिका४ का ४६ वर्षीय पुरुष कोरोना भाइरसको संक्रमणबा ज्यान गएको थियो । उनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण ३१ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएर सेती अस्पतालमा उपचारकै क्रममा ती पुरुषको असार ३ गते साँझ मृत्यु भएको थियो । तर, ती कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले (आज) असार ४ गते जानकारी दिएको हो ।
त्यसैगरी लम्कीचुहा नगरपालिका-२की ४३ वर्षीया महिला रहेको समेत कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । ती महिलालाई टाउकोमा चोट लागेपछि उपचारका लागि नेपालगन्ज ल्याइएको थियो । तर उपचारकै क्रममा असार २ गते ज्यान गएको थियो ।
उनको कोरोना परीक्षण गरिएको नतिजा असार ३ गते पोजेटिभ आएको थियो तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले असार ४ गते (आज) कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको जानकारी दिएका हुन् ।
कोरोना का कारण निधन हुने उनिहरु क्रमश्: २१औ र २२औ व्यक्ती हुन ।
सोमबार थपिए कोरोनाका १ सय ८० संक्रमित, २६४ डिस्चार्ज, ३५ जनाको निधन
आजमात्रै काठमाडौं उपत्यकामा ५४ जना कोरोना संक्रमित थपिए
काठमाडौंमा मात्रै थपिए २७ जना कोरोना संक्रमित